Alessandro Del Piero Oo Bannaanka Keenay SIRTA Iyo Sababta Paulo Dybala Ugu Dhibaatoonayo Juventus - Cadalool.com
Alessandro Del Piero Oo Bannaanka Keenay SIRTA Iyo Sababta Paulo Dybala Ugu Dhibaatoonayo Juventus
Halyeygii xulka qaranka Italy ee Juventus ee Alessandro Del Piero ayaa daboolka ka qaaday sirta iyo sababta keentay dhibaatooyinka laacibka reer Argentine ee Paulo Dybala ku haysata Juve xili ciyaareedkan.
Del Piero waxa uu tilmaamay in Dybala aanu la jaan-qaadi karaynin qaab-ciyaareedka waqtigan ee Juventus oo aan ahayn mid ku habboon hannaankiisa ciyaareed ee xidhiidhinta khadka dhexe iyo weerarka.
Bernardeschi iyo Mandzukic ayaa Cristiano Ronaldo ku weheliya weerarka, sidoo kalena waxay ka qayb-qaataan ciyaarta kale ee abuurista fursadaha iyo difaacaba, waana sababta uu tababare Allegri kaydka u galiyey Dybala, sida uu ku dooday Alessandro Del Piero.
“Waa ciyaartoy xidhiidhiya weerarka iyo dhexda. Laakiin, waqtigan, Juve waxay ku ciyaartaa saddex weeraryahan. Bernardeschi iyo Mandzukic weerar kama qaadaan meelaha bannaan, laakiin waxay kooxda ka caawiyaan kubbad dhisidda.” Ayuu yidhi Alessandro Del Piero oo ka hadlayey sababta uu Dybala kaydka ugu qaatay xili ciyaareedkan.
“Dybala waa beddel kale oo yar. Wuxuu ku wanaagsan yahay kubbad dhiibista, laakiin waqtigan ma ciyaarayo kulamada muhiimka ah. Fikir ahaantayda, si xun umuu ciyaarin kulankii Madrid. Marar badan ayaa khaladaad lagu galay laakiin natiijada ayaan wanaagsanayn, maalin fiicana umay ahayn Juve oo waxa ciyaarta maamulanaysay Atletico Madrid. Ciyaartii dambe, laguma soo bilaabin isaga (Dybala). Waa arrin ceeb ah, sababtoo ah wuxuu leeyahay tayo uu qof kastaa ogyahay.” Ayuu raaaciyey Del Piero.
Hadalka Del Piero ayaa kusoo beegmayaa xilli ay suuqa ku jiraan warar sheegaya in laacibka reer Argentine uu doonayo inuu iskaga tago Juventus, isla markaana uu raadsado koox kale oo si buuxda ugu dhisan karayo xirfaddiisa wanaagsan, isla markaana boos joogto ah uu ka helayo, waxaana lala xidhiidhinayaa kooxo Ingiriis ah iyo kuwo Spain ka dhisan.